FARIIN KA TIMID GABAR UU JEN CAYDIID DHALAY
This article was Published at: 04-08-2012 and has been viewed 17375 times
August, 04-2012 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FREIND
Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa Magaalada Galkacyo uga dhawaaqay inuu yahay Madaxweynaha Galmudug , 1-dii Augosto oo ku beegneed maalintii uu Geeriyooday Jeneral Mohamed Farah Caydiid .
Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ah ninka sheegtay inuu dilay Jeneral Mohamed Farah Caydiid ayaa lagu dhaliilay inuu gocosha colaadeed geliyay qalbiyada qoyska Marxuum Caydiid maadama 1 Augusto ay tahay maalin murugo xambaarsan oo dunida laga dhigayo xuska allaha u naxariistee Jeneralka.
Gabadh uu dhalay Jeneral Caydiid oo Waagacusub la soo xiriirtay ayaa tiri " Waxaan moodayay in adeer Cabdi Qaybdiid uu qoomamo ka joogo Colaadii uu beesha Sacad ka dhex riday iyo dilkii uu Aabaheey Mohamed Farah Caydiid dilay hasse yeeshee waxaan xaqiiqsaday inuu ku faraxsan yahay maadama uu maalin ku beegan geeridii Aabaheey ku dhawaaqay inuu yahay Madaxweynaha Galmudug taas oo ka dhigan inuu ujeedo ka leeyahay ,sida guul muujin "
Gabadha Jeneral Caydiid oo codsatay inaan magaceeda la xusin waxay hadalkeeda ku dartay " Adeer Qaybdiid waxaan leeyahay , Hadaad Aabaheey dishay ,waxaan xaq kuugu lahaa inaad Aabe ii noqoto laakiin adigoon weligaa Agoonta la soo xiriirin ,waa nasiib daro inaan telefishinada kaa aragno adigoo colaadii laga bogsooday dib u hurinaya,waliba iyadoo ay tahay maalin aan u fadhino xuska allaha u naxariistee hogaamiyahii ku sababsaday ee Aabaheey Jeneral Mohamed Farah Caydiid"
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa isweydiiyay sababta uu Jeneral Qaybdiid u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Galmudug maalin ku beegan geeridii Jeneral Caydiid .
Jeneral Qaybdiid oo ahaa taliyahii Maleeshiyo beeleedka Cismaan Caato ayey dad badan uga fadhiyeen inuu gogol nabadeed u dhigo dhamaan qeybaha beesha Sacad si uu saamaxaad u waydiisto Agoonta uu Aabayaashood dilay,ee abtiga iyo adeerka u yahay.
Marka la qiimeeyo guuxa beesha Sacad waxaa hubaala in sheegashada Qaybdiid ee Madaxweynenimada Galmudug tahay mid horseedi doonta Colaad dhiig ku daato maadama saansaanta muuqato tahay mid bulshada xasuusineysa wixii dhacay sanadkii 1995.
DOQONIMADII SHALAY IYO DAMANAANTA MAANTA EE BEESHA SACAD.
Sanadkii 1995 beesha Sacad Habargidir iyadoo aan lagu heysan hogaanka ugu sareeya dalka Somalia ayey doqonimo qaaday oo dhexdooda is dileen, iskana dileen haldoorkoodii dunida u taqiin Libaaxa Afrika allaha u naxariistee Jeneral Mohamed Farah Caydiid.
Sacadkii Shalay kama faaíideeysan jaaniskeey heysteen ,ma ilaalin sumcada iyo karaamada magaca guud,waxaana la dhihi karaa xisaabtaba uguma jirin in towrada dalka kala dhaxeyso beelaha Soomaaliyeed balse karaamadii alla siiyay darteed looga dambeeyay hogaaminta.
17 sano kadib maanta oo lagu jiro 2012 dhamaadkiisa waxay hogaamiyeyaasha iyo horboodayaasha beesha Sacad isku heystaan Madaxtinimada Maamul Goboleedka Galmudug State oo degaan ahaan metela beelaha Hawiye,Daarood,Dir iyo Madhibaan.
Waxaa Damanaan iyo doqonimo ka xun tii shalay ka muuqataa beesha Sacad oo lagu tilmaami karo kuwa aan qaladkoodii shalay ku noqon Macalimiin waaya araga.
Beesha Caalamka ayaa aqoonsan Maamul goboleedka Galmudug ,waa maamulka kaliya ee dhamaan beelweynta Hawiye ku faanaan.
Siyaasiyiinta beelaha la dega beesha Sacad kuma heystaan Siyaasiyiinta Sacad xilalka sare ee Galmudug State sida Madaxweynenimada,Madaxweyne ku xigeen,Gudoomiye baarlamaan,Wasiirada muhiimkaa,ilaa Agaasimayaasha hadana nasiib daro beesha inay ka faaíideeysato fursadahaan waxay ka door bideeysa doqonimadii shalay iyo dagaal ka sokeeye.
Cabdi Qaybdiid markii lagu xiray Sweden waxaa u banaanbaxay Hawiye oo dhan,wuxuuna kumanaan qof ugu sheegay Muqdisho inuu dib dambe uga qeyb qaadan doonin Colaad Sokeeye.
Beesha Sacad oo dhan uma kala harin dagaalkii Qaybdiid la galay golahii Maxaakiimta taas oo ka marqaati kacday inay beesha sidii lagu yaqiin u tahay UL iyo Diir.
Jeneral Qaybdiid oo aan hubo inuu maqaalkaan gaari doono waxaan leeyahay " Dadkaad kala dishay ha isku sii dilin ee ka shaqeey dawadooda iyo danta guud maxaa yeelay damaca waalan waa kii daleeshay ku dhigay ee Shariif Sheekh Ahmed kugu yasay"
Noqo ONE SACAD+ONE MADARKICIS+ONE HIRAAB+ONE HAWIYE+ONE IRIR+ONE SOMALI.then you are Lion of Africa.
Fikradaada ku soo dir [email protected]